राष्ट्रिय धावकको पीडाः काँचो चना खाएर कहिलेसम्म दौडिनू ? « Janata Times
४ आश्विन २०७५, बिहीबार ००:००
राष्ट्रिय धावकको पीडाः काँचो चना खाएर कहिलेसम्म दौडिनू ?
दौडन तयार भएर ट्रयाकमा जानुअघि कसले सोच्छ होला र लास्ट हुन्छु भन्ने ? अरु कुदिरहेको हेर्दा लाग्छ, ह्या… यति त म पनि सक्छु नि ! तर, जब दौडिन थालिन्छ, तिनीहरुले नै धेरै पछि छाडिदिन्छन् । अनि आफ्नो अवस्था छर्लङ्ग बुझिन्छ ।
अहिले जिन्दगीको दौडमा पनि त्यस्तै छर्लङ्ग भएको छु म । नामको भोक मेटियो वा हरायो । अझ भनौं, लोकप्रियताको चाहनालाई भविश्यको चिन्ताले ओझेलमा पारिदिएको छ । बरु अहिले काँही त किन खेलाडी बनेछु भन्ने पो लाग्छ ।
हुन त मैले दौडमा लाग्ने, खेलाडी बन्ने सपना पनि धेरै पछि मात्रै देखेको हुँ ।
खुट्टा भाँचिएर कहिल्यै ठीक नहोला जस्तो भएको थियो कुनै बेला । १०० मिटर र २०० मिटर दौडमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदा एक अर्थमा आफ्नो सपना भेट्टाएँ । तर, अहिले त त्यही सपनाले झनै पीडा दिएको छ । त्यो सपना किन देखें होला जस्तो लागेको छ ।
न अब अरु क्षेत्रमा राम्ररी लाग्न सक्छु, न त खेलकुदमा देखेको भविश्य नै मिलिरहेको छ । जीवन र मृत्युको दोसाँधमा लडिरहेको मान्छे जस्तो भएको छु भन्दा फरक नहोला ।
खेलकुदबाट राष्ट्रिय स्तरमा मैले राम्रै गरेको छु जस्तो लाग्छ । तर पनि अहिले किन निराश भएँ ?
कुराहरु अन्त्यबाट सुरु गरें । सुरुबाट सुरु गर्छु, अनि तपाईँहरुले बुझ्नु हुनेछ ।
करोडको गाडी चढेर बाटोका खाल्डा र भत्केका सडक देखिदैँन, त्यसैले म सडकमै हिँडन चाहन्छु : हर्कराज साम्पाङ
धरान, ११ जेठ । ठूला राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका धरानमा नाम चलेका
झापा, ११ जेठ । झापामा एक जना १५ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । उनलाई
बिराटनगरमा पनि एमाले नै बन्यो सवैभन्दा ठूलो दल : गठबन्धनमा सहभागी माओवादी र नेकपा एस सून्य (सूचीसहित)
मोरङ, जेठ ९ । प्रदेश १ कै एक मात्र महानगरपालिका बिराटनगरमा पनि नेकपा एमाले नै
केपी ओलीको गृहनगर दमकमा कमजोर छैन एमाले, नेतृत्व गुमाए पनि नगरसभामा एक्लै दुईतिहाइ सीट
झापा, जे७ ९ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा एमालेले